» प्रधानमन्त्री ओली पनि टिकटकमा एकाएक भाइरल ! एकैदिनमा १२ लाख भन्दा बढीले हेरिसके भिडियो…हेर्नुहोस् । प्रधानमन्त्री ओली पनि टिकटकमा एकाएक भाइरल ! एकैदिनमा १२ लाख भन्दा बढीले हेरिसके भिडियो…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
Yuwa Aawaj 662 Views
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले पनि टिकटक एकाउन्ट खोल्नुभएको छ ।
उहाँले आइतबार ‘केपी शर्मा ओली अफि’सियल’ नामक टिकटक एकाउन्ट खोल्नुभएको हो ।
उहाँको एकाउन्ट भेरिफाइड समेत भइसकेको छ । ओलीका प्रेस सल्लाहकार सू’र्य थापाले प्रविधि विज्ञहरुसँग अका’उन्ट बनाउनेबारे छलफल भएको बताउनुभयाे । ‘टिकटकमा पनि एकाउन्ट खोल्ने कुरा भएको थियो, तर यसबारेमा मलाई विस्तृ’त जानकारी भएन, प्रा’विधिक सल्लाहकारहरुलाई थाहा हुनुपर्छ,’ थापाले भन्नुभयाे ।
प्रम ओलीको टिकटक एकाउन्टमा अहिले एउटा मात्रै भिडियो हालिएको छ । याे समाचार तयार पारिस’क्दासम्म उक्त भिडियोको भ्युज १२ लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ । ४ हजार ४ सय ७५ कमेन्ट, र ९८ हजार भन्दा बढी लाइक र २ हजार ७ सय बढी सेयर पुगिसकेको छ ।
मालपोत, विद्युत् महसुल, भन्सार महसुल, आन्तरि’क रा’जश्‍व, सवारी चालक अनुपति पत्र र नवीकरण जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवालाई एकीकृत सेवामा जोड्ने प्र’क्रिया सुरु भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिच’यपत्रलाई सेवा प्र’वाहको मूख्य आधार बनाउने गरी काम अघि बढाएको छ’, पहिलो टिकटक भिडियो सन्देशमा भनिएको छ।